Umlando Wehubo Lesizwe Inkosi sikelela! - Durban Local History Museums
Umlando Wehubo Lesizwe Inkosi sikelela!
By Durban Local History Museums1st March 2021June 6th, 2021People
Njengawo wonke amazwe anamahubo awo asefana nomkhuleko okuvulwa ngawo uma kukhona okuzokwenziwa, nalana ke eNingizimu Afrika sinehubo lesizwe iNkosi Sikelel’ Afrika, okuqhaphelekile ngayo ukuthi ziningi izindlela ehutshwa ngazo. Kodwa ke esemgangathweni okwamanje ilena eculwa yiqembu lezomculo Ndlovu Youth Choir uma beyihuba impela uvukelwa ukuzigqaja ngobuwena! Bese kuyiminyaka eminingi impela nje abantu abaningi bebe ngazigqaji ngaleli hubo, ngoba phela beligcizelela ukwehlukana ngokwezinhlanga okukhona eNingizimu Afrika.
Kuze kube unyaka ka 1994 ihubo lesizwe bekade Die Stem van Suid-Afrika, ebeligxile kwinkondlo yango 1918 eyayilotshwe ngu C. J. Langenhoven. Kuze kube unyaka ka 1994 ihubo lesizwe bekade kuyi ”Die Stem van Suid-Afrika” ebeligxile kwinkondlo yango 1918 eyayilotshwe ngu C. J. Langenhoven. Le nkondlo yayihambisana nomculo ka by Reverend Marthinus Lourens de Villiers ngonyaka ka 1921, kanti lalikhuluma ngendaba ye Voortrekkers and the Great Trek. . Ngeminyaka yo 1938 kuya ku 1957, ngalenkathi ”God Save the Queen” esetshenziswa njengehubo lesizwe elihlanganisa amazwe amabili, kwaqalwa lapho ukuthi ”Die Stem” abe ihubo eliculwa izona zonke izinhlanga zaseNingizimu Afrika ngokusemthethweni uma kukhona imicimbi nemibungazo ekhona. Lokho kodwa kwakungasho ukuthi ilona lodwa iculo eliculwayo, ngoba phela abantu abaningi bakulelizwe bebehuba elinye ihubo ebelingabekiwe ngokomthetho ukuba libe ihubo lesizwe.
Ihubo Nkosi Sikelel iAfrika lidume kakhulu emabandleni okukhonza njengehubo lokudumisa, kuthe ngonyaka ka 1905 isikole samabanga athe xaxa Ohlange Secondary School, esasungulwa ngu Dokotela John Langalibalele Dube lasenza amanye amaculo aso. Lesikole sasihambela kakhulu izindawo, okwenza kwagcina lelihubo selidume kakhulu, kuthe ke ngonyaka ka 1912 Nkosi Sikelel’ iAfrika yabe isihutshwa okokuqala emhlanganweni owawubanjwe ubuholi babantu abaMnyama base Ningizimu Afrika elalibizwa ngokuthi i-South African Native National Congress lomhlangano owawubanjelwe e-Bloemfontein, nokuyikhona lapho uDokotela Dube akabekwa khona ukuba abe ngumongameli wokuqala waleli qembu elagcina selishintshe laba African National Congress edume ngelika (ANC). Ngonyaka ka 1925, lelihubo kwabe seku ngeleqembu le ANC ngokusemthethweni, kanti laliculwa kulwiswana nohulumeni wobandlululo ngaleso sikhathi. Ngenxa yokuthi lelihubo lase linobudlelwano neqembu le ANC labe selidingiswa ekutheni lihutshwe, lidingiswa uhulumeni wobandlululo.
Ekuqaleni kwalo lelihubo lalilotshwe nguMnumnzane Enock Sontonga owayengu mbhidi wamakwaya ngonyaka ka 1897, ecela izibusiso kuMvelingqangi ecelela bonke abantu baseNingizimu Afrika, kanti ke lalibhalwe ngolimu lwesiXhosa, lelihubo lalihamba nomnkenenezo i-aberystwyth la Joseph Parry wasezweni iWales owayengumbhali wazengoma aphinde abe ngumculi. Kuthe ngonyaka ka 1927 lelihubo lase lihlukaniswa izigaba eziyisikhombisa ezibizwa ngama ”stanza”, lihlukaniswa imbongi yolimi lwesiXhosa uMnumzane u-Samuek Mqhayi.
Itshe lesikhumbuzo lika Enoch Sontonga, elise Braamfontein
Emva kokubekwa njengomongameli omusha uDokotela Nelson Mandela ngonyaka ka 1994 wabe esememezela ukuthi Nkosi Sikelel’ iAfrika kanye no Die Stem bazoba ngamahubo esizwe omabili, kepha lokho kwaphambanisa izinto kakhulu. Ingakho ngonyaka ka 1996 kwabe sekuhlanganiswa omabili lamahubo kodwa afinqwa ukuze ezoba mafishane kwase kuba ukukhishwa ngokusemthethweni kwalelihubo elisha elihlanganise amahubo amadala omabili. Lelihubo ke lona lisebenzisa izilimu eziningi ezahlukene, ngoba imisho emibili yokuqala kusetshenziswe ulimu lwesiXhosa, neminye emibili yokugcina kwistanza sokuwqala kwasetshenziswa isiZulu. Istanza sesibili sona silotshwe ngesiSuthu, bese kuthi kwisitanza sesithathu kwafakwa izinhlavu ezindala zika Die Stem van Suid-Afrika zolimu lwesiBhunu bese kuthi kwistanza sokugcina kusetshenziswe ulimu lwesiNgisi, uma seliphetha liphethwe ngazo futhi izinhlamvu zika-Die Stem.
Zingu 24 Mandulo 1996 ngosuku lwamagugu nemilando, iliba lika Mnumzane u-Enoch Sontonga lamenyezelwa ukuthi lingelinye lamabila esizwe sonkana ukubungaza ubuqhawe bakhe, lapho ke nguyena owayengumongameli ngaleso sikhathi uDkt Nelson Mandela owathula umkomeliso obizwa ngokuthi ”Order of Meritorious Service” ewubhekise kuye uMnumzane Sontonga ngeqhaza alibambe eNingizimu Afrika.
INingizimu Afrika akusiyona kuphela ebungaza ihubo elaqanjwa nguSontonga, njengoba namazwe angomakhelwane asenelawo lelihubo alithathele kuleli lana sibala izwe lase Tanzania and Zambia. okutshengisa wona amava kaSontonga.
Izithombe ngabakwamages www.pianomomsheetmusic.com, www.cnandco.com kanye www.theheritageportal.co.za
National anthemNkosi Sikelele iAfrika
Deseni Soobben exhibition at the Tate in London